Catégorie : Lesona 8:Ny fanabeazana sy ny drafi-panavotan'Andriamanitra
Miompana amin'ny tantaran'Andriamanitra sy ny olony ny Baiboly. Indraindray toy ny tantaram-pitiavana tsy nizotra araka izay niheverana azy izany. Indraindray koa toy ny tantaran'ny Ray anankiray sy ny zanany maditra, izay miverina eo aminy ihany amin'ny farany.
Araka ny tanjon'ny lesontsika amin'ity herinandro ity anefa dia hijery lohahevitra hafa isika ao amin'ny tantara ara-Baiboly, dia ny tantarana mpampianatra iray sy ny mpianany. Tsy mety afa-panadinana ireto mpianatra, kanefa manam-paharetana ny mpampianatra mamerimberina amin'izy ireo ny lesona mandra-pahaizan'izy ireo na ny sasany amin'izy ireo izany amin'ny farany.
Mampahatsiahy antsika ny tantaram-piainantsika olombelona, izay saika voafehintsika tsara, ny tantara ara-Baiboly. Azo antoka fa tsara fiafara sy tonga amin'ny tanjona nokendreny ny tantaran'Andriamanitra sy ny olony ao amin'ny Baiboly. Azo antoka izany vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra izany amin'ny olony. Maro no tsy mahatakatra, ary manahy aza ny amin'ny anjaran'ny olombelona ao anatin'io fifandraisan'Andriamanitra aminy io, ka mihevitra fa ezaka mafy no takina amin'ny olombelona mba hahazoany famonjena. Tsy izany anefa no votoatin'ny Baiboly fa fanasana omen'Andriamanitra ny mpanota mba hahafantarany Azy sy hahatakarany ny sitrapony. Ny mianatra mba hahafantatra an'Andriamanitra no tena tokony havalintsika ny fahasoavany. Tsy voavidintsika izany fahasoavana izany fa ny mianatra ny momba izany no azontsika atao. Inona tokoa moa no atao hoe fanabeazana kristianina raha tsy ny fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra no ivony?